Jitsi Sangana neyakavhurika sosi app yevhidhiyo musangano | Linux Vakapindwa muropa
Jitsi Sangana: yemahara uye yakavhurika sosi mhinduro yevhidhiyo musangano
Ikozvino SARS-CoV-2 yasvika uye haina kunyatso kujeka kuti izvi zvichapera riini, mukushaya kurapwa kwakakwana kana jekiseni, zvinhu zvakawanda zvachinja munharaunda medu. Iyo denda raita kuti zvive zvakakosha kushanda neimwe nzira, pamwe nekuramba ichitaurirana nenzira yakati siyanei. Vhidhiyo yekufona kana yevhidhiyo musangano zvanyanya kukosha, ndosaka iwe uchifanira kuziva Jitsi Tosangana.
Zvinogona kuve sevhisi inonakidza kwazvo, kwete chete nekuti yakavhurika sosi uye yemahara, asi zvakare nekuti inogona kuve chishandiso chakakura kune avo vanotsvaga kushanda vari kure (telecommuting), uye kune avo vanofanirwa kudzidza vari chinhambwe. Imwe nzira kune mamwe masevhisi seSkype, Zoom, nezvimwe.
NaJitsi Sangana iwe unogona kuronga ako epamhepo makirasi, misangano nevatengi vako, bata mhuri kana misangano yebasa, nezvimwe. Zvese zvine sevhisi izvo zvinogona zvakare gara pane yako server, kana iwe uchida zvimwe kutonga kweMubati. Uye iwe unotoziva kuti kana iwe uchifarira, unogona kutanga nekushanyira nzvimbo yayo yekurodha mu webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Unogona kuwana iyo app yeIOS, yeAroid uye uwane zvinyorwa uye ubatsire nezve chirongwa.
Kana zvakadaro zvinhu zvinoshamisa kwazvo kubva kuJitsi Sangana, une:
Hapana kunyoreswa kunodiwa mushandisi, izvo zvisingazivikanwe.
Inobvumira gadzirisa zvinyorwa uchishandisa Etherpad.
Iyo ine kugona auto-inomiririra kuitambira pane yako wega server kana uchida.
Inotsigira kusangana ne Slack uye Rocket.chat.
Izvo zvine password kudzivirirwa Kana zvichidikanwa.
Beta inotsigira kuguma-kumagumo kunyorera.
Kubvuma kumashure blur yewebhu webcam (beta).
Inobvumira sarudzo ye kurekodha.
Support for live broadcast.
Unogona govana mavhidhiyo ako neYouTube.
Inokupa iwe mukana weku ona chimiro vashandisi 'network.
Kubatanidzwa kwe Google Calendar uye Microsoft Calendar.
Miscellaneous chat mabasa.
Kubatana kwe mucherechedzo wepasi rese.
Zvinogona kuva ramba uchidana yakafanana vhidhiyo gare gare hapana chikonzero cheimwe kodhi yemusangano.
Zvirongwa zvekuisa sarudzo yakaderera bandwidth, kuitira kuti network ishandiswe yakaderera kana iwe uchinonoka kubatana kweInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Jitsi Sangana: yemahara uye yakavhurika sosi mhinduro yevhidhiyo musangano
Ndinoda kuti iwe uite dzidziso yekuti ungagadzira sei server yekumba naJitsi uye ugokwanisa kuiwana kubva kunze kwenzvimbo yemuno.
CERN: AMD neLinux zvinowedzera kuwedzera kweLHC